Khilaafka Soomaalida iyo Oromada oo baarlamaanka Itoobiya saameeyay | Saxil News Network
Xildhibaannada ka soo jeeda Amxaarada iyo Oromada ayaa qaadacay kullanka baarlamaanka Itoobiya iyagoo “ka careysan” rabshadaha u dhexeeya Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
Waxay sheegayaan in aysan jirin sabab uu baarlamaanka u kulmo illaa Ra’iisul wasaare Hailemariam Desalegn uu ka bixinayo sharaxaad ku saabsan qalalaasaha u dheexeeya qowmiyadaha ee dalka ka taagan.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn oo ka hadlay TV-ga dalkaasi ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah “lagu laayay xero boolis dhexdeeda”.
Sida wararka ay sheegayaan, waxaa halkaasi lagu dilay “in ka badan 100 qof”, balse Ra’iisul wasaaraha ma uusan sheegin tirade rasmiga ah ee la dilay. Laakiin Hailemariam Desalegn wuxuu carabka ku adkeeyay in dhibaato badan ay ka dhacday goobta.
Wuxuu dhacdada ku tilmaamay “dil wadareed ka dhan ah dad shacab oo Soomaali ah”, kuwa dilka geystayna wuxuu ku tilmaamay dembiilayaal.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xaqiijiyay in guddi loo saaray arrinta si ay u soo baaraan ka dibna wuxuu sheegay in waxa sharciga uu ka qabo lagu qaadi doono kuwa dembiga uu ku caddaado.
Sidoo kale. waxaa la shaacin doonaa sida dhibaatada ay u dhacday iyo dadka geystay, sida uu sheegay Hailemariam Desalegn, ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
Sanadkii 2004, afti la qaaday ka dib, 80 boqolkiiba 420 deegaan ee lagu muransan yahay, waxaa la siiyay Oromada. Ka dib go’aankaasi, tobannaan kun oo Soomaali ah ayaa qaxay, iyagoo ka baqayay rabshado.
Go’aankaasi weli lama meelmarin, taasina waxay ka mid tahay arrimaha sababta u ah rabshadaha hadda taagan.